အက်ဆေးတစ်ပုဒ် ရေး၍ ဖိတ်ကြားခြင်း – Min Thayt
လွန်ခဲ့သော ရက်သတ္တပတ်က၊ ကျနော် ကိုအောင်သန်းထွဋ် နှင့်တွေ့သည်။ ကျနော်တို့ စာကြည့်တိုက်မှာ၊ ပြန်/ဆက်ဝန်ထမ်းများကို သင်တန်းပေးရန် သူကလာရောက်ခြင်းဖြစ်သည်။ ကျနော်က၊ စာကြည့်တိုက်ထဲမှာ ကိုယ့်ဘာသာ ကွန်ပြူတာကို အာရုံစိုက်နေသည်။ လူတစ်ချို့ဝင်လာတာ သိသည်။ ကျနော် မကြည့်အားသေး။ ကွန်ပြူတာထဲက၊ ဝက်ဆိုဒ်တစ်ခုထဲ မဲပြီး ကြည့်နေမိသည်။ ကျနော့် နဘေးမှာ၊ ဤလူများဝင်ထိုင်သည်။ ကျနော့်ပါးစပ်မှ၊ သီချင်းလေး တိုးတီးရွတ်နေသည်။ ပြီးတော့မှ ခေါင်းမော့ကြည့်လိုက်သည်။ “ဟာ…. ကိုလူပျိုကြီး…” ဆိုပြီး အံ့ဩဝမ်းသာဖြစ်သွားသည်။ “မတွေ့ရတာတောင်ကြာပြီ… ဘာတွေလုပ်၊ ဘယ်တွေ သွား သလဲ” သဖြင့် စကားစတွေ ဖောင်ဖွဲ့သွားတော့သည်။
ကိုအောင်သန်းထွဋ်ကို ကျနော်ခင်သည်။ ကျနော်နှင့် အသက်အရွယ်အားဖြင့်၊ အတော်အတန် ကွာလှသော် လည်း၊ ကျနော်တို့ နှစ်ယောက် ရင်ဘတ်ချင်းနီးသည်ဟု ကျနော် ခံစားရသည်။ ကိုအောင်သန်းထွဋ်က၊ ကျနော့် ထက် ရင်ဘတ်ပိုကျယ်သည်။ သူ့၌ ခံစားစရာများ၊ ဒု နှင့် ဒေး ရှိဟန်တူသည်။ သူ့စာကြည့်တိုက်မှာ၊ ဂီတ၊ အနု ပညာ၊ ယဉ်ကျေးမှု အနုအလှ ပစ္စည်း အစုံစုံ ရှိသည်။ ကျနော် သဘောကျသည်။ ကျနော်က ရသစာပေဖတ် ခြင်းမှာတောင်၊ ခေါင်းပါးလွန်းလှသည့် လူတစ်ယောက်။ သို့သော် ကျနော်တို့မှာ တူသည့်အချက်က၊ ပညာနှင့် စာပေကို ချစ်မြတ်နိုးခြင်းပင် ဖြစ်သည်။
ထိုသို့ပြောရင်း၊ ကိုအောင်သန်းထွဋ်က သူတို့ စာကြည့်တိုက်တွင် အင်္ဂလိပ်စာဆွေးနွေးခန်း များအပြင်၊ ပညာရပ် ဆိုင်ရာ ဆွေးနွေးပွဲများလည်း သောကြာနေ့တိုင်း လုပ်ဖြစ်နေကြောင်း၊ ပြောဖြစ်သည်။ ဤသို့ဖြင့်၊ မနက်ဖြန် လုပ်မည့် ဆွေးနွေးပွဲတွင် ကျနော် ဆွေးနွေးဖြစ်ဖို့၊ အကြောင်းဖြစ်လာခဲ့သည်။
ဆွေးနွေးပွဲများကို ကျနော် လိုလားနှစ်သက်သည်။ ကိုအောင်သန်းထွဋ်တို့က၊ စာကြည့်တိုက်အပြင် အနုပညာ၊ အင်္ဂလိပ်စာ ဆွေးနွေးလေ့ကျင့်မှုများကိုပါ လုပ်လာသည်ကို ဝမ်းသာသည်။ ထိုမျှမက၊ ယခုလို ပညာရပ်ဆိုင်ရာ ဆွေးနွေးပွဲများကို အပတ်စဉ် လုပ်လာနိုင်သည်ကိုက၊ အားရစရာဖြစ်သည်။ စာကြည့်တိုက်တို့၏ လုပ်ငန်းသည်၊ စာအုပ်စာပေ ငှားရမ်းပေးသည့် အဆင့်မှ ကျော်လွန်သင့်သည်ဟူသော သဘောထား ကျနော့်တွင်ရှိသည်။ ကျနော်တို့ကိုယ်တိုင်လည်း၊ ထိုသို့ လုပ်ဆောင်ရင်းပင် နိုင်ငံရေးစာပေကို နယ်အနှံ့ လှည့်လည် သင်ကြားပေး သည့် အခြေအနေသို့ရောက်လာခဲ့သည်။
ဆွေးနွေးပွဲအတွက်၊ ခေါင်းစဉ်ကို နောက် (၂) ရက်လောက်နေလျှင်၊ ကျနော် ပေးပါမည်ဟု ကတိခံသည်။ ထိုသို့ ဖြင့် ကျနော့်ခေါင်းမှ မော်လီကျူးများ အစီအရီ ပလုံစီထကုန်သည်။ ဆွေးနွေးပွဲ၌၊ အခုတလော ကျနော် စိတ်ဝင် တစားလေ့လာဖြစ်နေသည့်၊ အကြောင်းအရာ လုပ်ရန် ဆုံးဖြတ်လိုက်သည်။
ဤခေါင်းစဉ်ကို ရွေးလိုက်ရခြင်း အကြောင်းရှိသည်။ ယခု မြန်မာ့နိုင်ငံရေးနှင့် ကမ္ဘာ့နိုင်ငံရေးတွင်၊ အကြီးကျယ် ဆုံးသော စိန်ခေါ်ချက်မှာ၊ လူမျိုးရေး၊ ဘာသာရေး ပဋိပက္ခများဖြစ်သည်။
ယဉ်ကျေးမှုများ၊ အမှတ်အသားများ၊ သင်္ကေတများ၊ အမှတ်တံဆိပ်များ၊ အမှတ်သရုပ်များ၊ အမျိုးသားရေး လက္ခဏာများ အချင်းချင်း၊ တိုးတိုက် ပွန်းရှမှုများက တစ်ဆင့်ဖြစ်ပေါ်လာသော၊ ပဋိပက္ခများ/ အဓိကရုဏ်းများ အကြောင်းဖြစ်သည်။ ကျနော်တို့ နိုင်ငံမှာ၊ အရေးပေါ် ဖြစ်ပွားနေသည်က၊ အနောက်တံခါးပြဿနာရှိသည်။ မြန် မာ့နိုင်ငံရေးအကူးအပြောင်းအတွက်၊ အကဲဆတ်သော နိုင်ငံရေးအမှတ်ဖြစ်သည်။
ကမ္ဘာမှာလည်း၊ နေ့စဉ်လိုလို ကြားနေရသည့်က၊ အကြမ်းဖက်မှုများ၊ အသေခံဗုံးခွဲတိုက်ခိုက်မှုများ၊ စစ်ပွဲများ ချည်းသာ။ ငါ့လူမျိုး၊ ငါ့ဘာသာ၊ ငါဒေသ၊ ငါ့ အမျိုးအနွယ် ဆိုသည့် အာဃာတများက၊ ကြီးထွားလာသည်။ လူ သားများသည်၊ အရောင်ကိုယ်စီ ချယ်လျက်၊ ဆိုင်းဘုတ်ကိုယ်စီ ထောင်လျက် ရှိကြသည်။ အမှတ်အသား အချင်း ချင်း ပြိုင်ဆိုင်မှု ပြင်းထန်လာရာက၊ ယဉ်ကျေးမှု တိုက်ပွဲများ ၂၁ ရာစုအတွင်း စတင်လာသည်။ ဤ အချက်သည်ပင်၊ ကျနော် စိတ်ဝင်စားစရာ နယ်ပယ် အကြောင်းအရာဖြစ်လာဟန်တူသည်။
ဤသို့ဖြင့်၊ အမှတ်သရုပ်နိုင်ငံရေးအကြောင်းကို ဆွေးနွေးရန်၊ ကျနော် ပြင်ဆင်သည်။ ပါဝါပွိုင့်ပြင်ပြီး ပြောရုံဖြင့်၊ ကျနော်မကျေနပ်ချင်။ စာတမ်းတိုလေးတစ်စောင်ပါ ရေးမည်ဟု ဆုံးဖြတ်လိုက်သည်။ သက်ဆိုင်ရာ၊ ဖတ်မှတ် စရာများ ကျနော် အတော်အတန် လုပ်ထားပြီးပြီ။ ဆက်လက်ပြီး၊ နက်နက်နဲနဲ လေ့လာရန်လည်း၊ မှတ်စုများ ထုတ်ပြီး လေ့လာသည်။ သည်လိုနှင့်၊ စာမျက်နှာ ၄၀ ရှိသော၊ စာတမ်းတိုလေး တစ်စောင်ရလာသည်။
စာတမ်းရေးရင်း၊ ကျနော် နားလည်လာသည့် အချက်ရှိသည်။ အမှတ်သရုပ်နိုင်ငံရေးဆိုသည့် လေ့လာချက်မှာ၊ မည်သည့် အကြောင်းအရာများကို ဆက်စပ်လေ့လာသနည်း ဆိုသည့်အချက်။
အမှတ်သရုပ်နိုင်ငံရေးဆိုသည်မှာ၊ အမှတ်အသား၊ လူမျိုး၊ ဘာသာရေး၊ ယဉ်ကျေးမှု၊ ယုံကြည်မှု၊ ကိုယ်စားပြုမှု များအကြားတွင် ဖြစ်ပေါ်လာသော နိုင်ငံရေး အားပြိုင်မှုများ၊ လူမှုတိုးတိုက်မှုဖြစ်စဉ်များကို အဓိကလေ့လာသော ပညတ္တိနယ်ပယ်ဖြစ်သည်။
• အမှတ်အသားများ၏ အစ၊
• အမှတ်အသား ပြိုင်ဆိုင်မှုများ၊
• အမှတ်အသားချင်း တိုးတိုက်မှုများ၊
• အမှတ်အသားတို့၏ ဩဇာလွှမ်းမိုးမှုများ၊
• အမှတ်အသားတို့အပေါ် မုန်းတီးနာကြည်းချက်များ၊
• အမှတ်အသားကြောင့်ဖြစ်သော ပဋိပက္ခများ၊
စသော စသော အကြောင်းအချက်များကို၊ အတိတ်၊ ပစ္စုပ္ပန် ၊ အနာဂတ် အတွက် ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် လေ့လာသော အကြောင်းအရာတစ်ရပ်ဖြစ်သည်။
အမည်၊ ဆိုင်းဘုတ်၊ သွေးသားဖြစ်တည်မှုများ၊ ရှင်သန်ရပ်တည်မှု၊ အကျိုးစီးပွားချင်း တိုးတိုက်မှုများအကြား ဖြစ် ပွားသော ပဋိပက္ခများကို ဆန်းစစ်သော ဆန်းစစ်ချက်များ လုပ်ရန် လိုအပ်သည်။
ကျနော့် စာတမ်း၌၊ ဟန်တင်တန်၏ ယဉ်ကျေးမှုများ တိုးတိုက်မိခြင်း ကျမ်းကို ဗဟိုပြုပြီးရေးသည်။ အစ္စလာမ်မစ် အခြေခံဝါဒ၏ ရေခံမြေခံကို တွေ့အောင်ရှာသည်။ ၂၁ ရာစုကို ခြိမ်းခြောက်နေသော ဝါဒကို လိုက်ရှာသည်။ ယဉ်ကျေးမှု အခင်းအကျင်းကို မြင်အောင်ကြည့်သည်။ ပြည်တွင်း၊ ပြည်ပ ကိစ္စရပ်များဖြင့် ချိန်ထိုးကြည့်သည်။ ၂၁ ရာစုမှာ၊ လစ်ဘရယ် ဒီမိုကရေစီကို ယှဉ်ပြိုင်လာနိုင်သည့် အမျိုးသားရေးဝါဒတို့၏ ခေါင်းထောင်ထလာမှုကို ကြည့်သည်။ အမျိုးသားရေးဝါဒသည်၊ ဒီမိုကရေစီနှင့် မိတ်ဖက်ဖြစ်လာရမည်ကို၊ အဘယ်ကြောင့် အညမည သဘော မယှဉ်တွဲရသနည်း ဆိုသည့် မေးခွန်းက ကျနော့်ခေါင်းထဲရောက်လာသည်။
ထို့ကြောင့်… စာတမ်း၌ ကျနော်က ဤသို့ရေးခဲ့သည်။
• ကြမ်းရှသော အမျိုးသားရေးဝါဒ
• အစွန်းရောက်သော အမျိုးသားရေးဝါဒ
• ဆင်ခြင်တုံတရားကင်းသော အမျိုးသားရေးဝါဒ တို့သည်၊ အမှတ်သရုပ်ပဋိပက္ခများအကြား၊ နေရာဝင် ယူလာနိုင်သည်ဖြစ်ရာ၊ လစ်ဘရယ်ဒီမိုကရေစီ သွားရာလမ်းကို၊ ခြိမ်းခြောက် ဟန့်တားလာနိုင်သော၊ ကိစ္စရပ်များဖြစ်လာနိုင်သည်။
ပထဝီနိုင်ငံရေးပြဿနာများအပေါ် အခြေခံသော၊ ပဋိပက္ခများသည် အနာနှင့်ဆေးတည့်အောင် မပေးပါက၊ လစ်ဘရယ်ဒီမိုကရေစီကို ကန့်သတ်လာနိုင်သော အကြောင်းများရှိလာနိုင်သည်ဖြစ်ရာ၊ ဤအချက်များကို သတိ ချပ်၍ ဖတ်ရှုကြရန် အရေးကြီးပါသည်။
ခေတ်တို့ တိုးတက်လာသည်ဖြစ်ရာ၊ ဂလိုဘယ်လိုက်ဇေးရှင်းက အဟုန်ပြင်းလာသည်။ ဆင်းရဲချမ်းသာ အကွာ အဟကြီးလာသည်။ ပညာအခံပါးလျသည့် အလွှာကလည်း၊ ထုလိုက် ထည်လိုက် ဖြစ်လာသည်။ အကြမ်းဖက် မှုနှင့် ပဋိပက္ခတို့၏ ရေခံမြေခံမှာ၊ အစာအိမ်ပြဿနာနှင့်၊ မကျက်သေးသော သမိုင်းအနာများ ရင်းထမှုကြောင့် ဟု ကျနော် နားလည်လိုက်သည်။
ထိုစိုးရိမ်ချက်များကြောင့်၊ စာတမ်း၌ သတိချပ်စရာ များဆိုသည့် ခေါင်းစဉ်ငယ်ဖြင့်၊ ကျနော် တင်ပြခဲ့သည်။
နိုင်ငံကြီးများ၏ အမှတ်သရုပ်အားပြိုင်မှုများအကြား၊ ကြားညပ်ဝင်နေသည့် နိုင်ငံငယ်များအဖို့၊ ကြီးစွာသော နိုင်ငံ ရေး အန္တရာယ်ဖြစ်လာနိုင်သည်။
• ရီရယ်ပိုလိုက်တစ်ကို အကျိုးစီးပွားများကသာ အမြဲမောင်းနှင်သည်ကို သတိ ချပ်ပါ။
• အကျိုးစီးပွားနောက်ခံ အမှတ်အသားများကိုလည်း သတိချပ်ပါ။
• အတ္တအစွဲများနှင့် ရင်းထနေသော အနာဟောင်းများကိုလည်း သတိချပ်ပါ။
• နည်းပညာကြောင့်၊ အာဃာတများ အပြန့်ကျယ်ကူးဆက်လာမှုကိုလည်း သတိချပ်ပါ။
• အထွေထွေ ဆင်းရဲကျပ်တည်းမှုက၊ အထွေထွေ မကျေနပ်ချက်များကို ဖြစ်ပေါ်သည်ကိုလည်းကလည်း သတိ ချပ်ပါ။
• စိတ်အလိုမကျမှုများသည် ရမ်းကားမှု၊ အကြမ်းဖက်မှုများအသွင်ဖြင့် စိတ်ထွက်ပေါက်ယူလာနိုင်သည် ကိုလည်း သတိချပ်ပါ…. ဟူ၍။
ယဉ်ကျေးမှု၏ သဘောသဘာဝများကို ဆန်းစစ်၍၊ ဖြစ်လာနိုင်သည့် အနာဂတ် အန္တရာယ်များကို မှန်းဆနိုင်ရန်၊ သတိပေးထားသည့် စာတမ်းတစ်ခုဖြစ်ရန် ကျနော် အားထုတ်ခဲ့သည်။ ထို့အတွက်၊ ရိုးရှင်းသော စဉ်းစာချက်ကို နိဂုံးပိုင်း၌ ကျနော် ထည့်ရေးသည်။
နိုင်ငံများနှင့် ယဉ်ကျေးမှု အုပ်စုများအကြား၊ နိုင်ငံရေးနှင့် စီးပွားရေး အကျိုးစီးပွားများအတွက် ခေါင်းဆောင်များ အချင်းချင်း ပြိုင်ဆိုင်တိုက်ခိုက်ကြရင်း ဖြစ်လာရမည့် အကျိုးဆက်က အဘယ်နည်း။
ထိုတိုးတိုက်မှု၊ ပဋိပက္ခများကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာရမည့် လူသားများ၏ အနာဂတ်ဘဝက အဘယ်သို့နည်း။
ဂလိုဘယ်လိုက်ဇေးရှင်းက၊ ကောင်းကျိုးလော၊ ဆိုးကျိုးလော။
• လောဘ ဆိုသည့် အကျိုးစီးပွား၊
• ဒေါသဆိုသည့် မကျက်သေးသော အနာများ၊ ရင်းထနေသော အနာများ၊ အတိတိသမိုင်း အနာများ၊
• မောဟဆိုသည့် မသိမှု၊ ဆင်ခြင်တုံတရားမဲ့မှု၊ အတ္တစွဲများဖြင့် ကြည့်မြင်မှုများကြောင့်သာ၊
o ယဉ်ကျေးမှုများ အချင်းချင်း၊ အမှတ်သရုပ်များအချင်းချင်း ပဋိပက္ခ ၊ အဓိကရုဏ်များ၊ ပြည်တွင်းစစ်များ၊ တိုက်ပွဲများ၊ အကြမ်းဖက်မှုများ၊ စစ်ပွဲများ ဖြစ်ပွားနေသည်ချည်းဖြစ်သည်။
လူသားတို့၏ သဘာဝသည်၊ ဇာတိစွဲစိတ်၊ အတ္တစွဲစိတ်၊ လူမျိုးစွဲ၊ ဘာသာစွဲ၊ အားကြီးလှသည်ဖြစ်ရာ၊ အမှတ် အသားများကို နောက်ခံပြု၍ အချင်းချင်း ပြိုင်ဆိုင် တိုက်ခိုက်မှုများ မပြတ် ပြုနေကြသည်။ နိုင်ငံရေးဟူသည်၊ အကျိုးစီးပွားနှင့် လုံခြုံရေးအပေါ်တွင် အမြဲအမှီပြုပြီး မောင်းနှင်နေသည်ဖြစ်ရာ၊ ၂၁ ရာစုသည်လည်း၊ မတည် ငြိမ်သော အခင်းအကျင်းများဖြင့် ဆက်လက်ကြုံတွေ့နေရအုံးမည် ဖြစ်သည်။
ထို့ကြောင့်၊ တည်ငြိမ်သော အခင်းအကျင်းအတွက် နှလုံးသွင်းဆင်ခြင်ဖို့ရန်မှာ၊ အားလုံးက လူသားချည်းပဲ၊ အရောင်တွေ၊ အမှတ်အသားတွေ၊ တံဆိပ်တွေ မတူချင်းကြောင့်သာ ကွဲပြားနေခြင်းဖြစ်ကြောင်း သတိချပ်သင့် သည်။
ပညာအခံဖြင့်၊ လူသားကို လူသားလို ကြည့်မြင်နိုင်ချေက၊ အမှတ်အသားတို့၏ တွန်းတိုက်မှုမှလည်းကောင်း၊ ယဉ်ကျေးမှုများတိုးတိုက်မှုမှလည်းကောင်း၊ လျော့ချနိုင်မည်ဖြစ်သည်။ ခေါင်းချင်းဆိုင် တွန်းတိုက်မှုများကို ရှောင် ရှားနိုင်မှ ပဋိပက္ခနှင့် စစ်ပွဲများကို သင်းသတ်နိုင်စေလိမ့်မည်။
• ယဉ်ကျေးမှု ဒိုင်ယောလော့များဖြင့်၊ အနာဟောင်းများကို ကုသနိုင်ကြစေ။
• စေ့စပ်ညှိနှိုင်းအဖြေရှာရေးနည်းစဉ်ဖြင့်၊ ရင်းထနေသော အနာများကို ကျက်အောင် ကုသနိုင်ကြစေ။
တကယ်တော့၊ ကျနော်က အကယ်ဒမစ်သမား မဟုတ်။ ဘာအကယ်ဒမစ် နောက်ခံမှလည်း ခိုင်ခိုင်မာမာရှိသူ မဟုတ်။ အမြင်မတော်ဘူး ထင်၍၊ စာများ ထရေးနေသူဖြစ်သည်။ နိုင်ငံရေးနှင့် စာပေလေ့လာမှု ပိုးကို မသတ် နိုင်၍ တတ်သရွေ့ မှတ်သရွေ့ လက်လှမ်းမီရာ၊ လေ့လာရင်း ဟောပြောပို့ချမှု အလုပ်ကို လုပ်နေသူမျှသာ။
ကိုအောင်သန်းထွဋ် တည်ထောင်ထားသော အင်တန်စတီ စာကြည့်တိုက်မှာ၊ (၁၆) နှစ်တောင် ရှိခဲ့ပြီးဖြစ်၍၊ ကျနော်တို့ စာကြည့်တိုက်နှင့် ကျနော့် စာဖတ်သက်နှင့်ယှဉ်လျှင်၊ ဝါက အတော်ကြီးနေသည်။ ဂုဏ်ယူစရာ။ ဆွေးနွေးပွဲ၌၊ ရဟန်းသံဃာတော်များ၊ လူငယ်များ၊ ကျောင်းသားများ၊ စာပေသမားများ စုဝေးသည်။ တိုးတက် လိုသော၊ ပညာကို ခုံမင်သော လူများ စုဝေးရာ အသိုက်အဝန်း၌၊ ခြေချခွင့်ရသည်က၊ ကျနော့်အတွက် ဝမ်းမြောက်စရာ။ ထိုဆွေးနွေးပွဲများအကြောင်းကို တွေးရင်း၊ ပြင်သစ်နှင့်ဥရောပတစ်ခွင်မှာ ရီနေးဆန့်ခေတ် အစပြုခဲ့ပုံက ခေါင်းထဲ ဝင်လာသည်။ ပညာခေတ်၊ ဉာဏ်အလင်းခေတ်တို့၏ အစမှာ၊ ဆွေးနွေးပွဲများက စသည် ဟု ကျနော် မြင်သည်။
ကျနော်တို့၊ မန္တလေးမှာ ဆွေးနွေးပွဲများ မပြတ်ရှိနေခြင်းက၊ မန္တလေးအတွက် ရီနေးဆန့်ခေတ်ကို ဖြတ်သန်း လျက်ရှိ သည်ဟု ကျနော် ခံစားမိသည်။
လူတစ်ယောက်အတွက် ရီနေးဆန့်ခေတ်ကို၊ ဖြတ်သန်းခဲ့ဖို့ လိုသည်။
မန္တလေးအတွက် ရီနေးဆန့်ခေတ်ကို၊ ဖြတ်သန်းခဲ့ဖို့ လိုသည်။
မြန်မာလူငယ်တွေ အတွက်၊ ရီနေးဆန့်ခေတ်ကို ဖြတ်သန်းခဲ့ဖို့လိုသည်။
မြန်မာနိုင်ငံအတွက် ရီနေးဆန့်ခေတ်ကို ဖြတ်သန်းခဲ့ဖို့ လိုသည်။
မြန်မာ့နိုင်ငံရေးအတွက် ရီနေးဆန့် ခေတ်နှင့် ယှဉ်သော နိုင်ငံရေး ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုများ လိုသည်။
ယခင်က၊ မြန်မာ့ရီနေးဆန့်ခေတ်ကို ဖြတ်သန်းခဲ့သည်ဟု ဆိုလျှင်တောင်၊ ယခုတဖန် ဖြတ်သန်းကြဖို့ ပြန်လည် လိုအပ်သည်။
ရီနေးဆန့်ခေတ်သည် အချိန်တိုင်း ခေတ်တိုင်း၊ နေရာတိုင်း၊ လူတိုင်း အတွက် လိုအပ်သည်။
ည ၁၀း၀၈
၂၉ ၊ ဇွန်လ၊ ၂၀၁၇
Tagged Clash of Civilization, Essay, Identity Politics
မျက်စိဆေးတွေနဲ့ …. ငါ
Previous post ဒီကလေးတွေ
Next post မျက်စိဆေးတွေနဲ့ …. ငါ